LEIPZIG VS SSC NAPOLI: Shaxda & safafka ay fiidkan kusoo geli karaan! – Gool FM
LEIPZIG VS SSC NAPOLI: Shaxda & safafka ay fiidkan kusoo geli karaan!
Raage February 22, 2018
(Leipzig) 22 Feb 2018 – Waxaa mar dhow ciyaaraya labada kooxood ee Leipzig vs SSC Napoli oo ciyaaraya lugta 2-aad ee EL iyadoo ay kooxda reer Jarman 3-1 ku hoggaaminayso lugta hore.
Dhanka Leipzig: Kooxdan reer Jarman ayaa fooska ka xigta dhiggeeda reer Talyaaniga, iyadoo lugtii hore kusoo adkaatay guriga Napoli, sidaa darteed macallin Hasenhuttl ayaa doonaya inay sii dhuujiskaan natiijada wanaagsan ee lugta hore.
Dhanka Napoli: Macallin Sarri ayaa lagu eedeeyay inuu dayacay lugtii hore kaddib markii uu safay koox gacan 2-aad ah, balse jookarka kooxdaasi ee Insigne ayaa ku doodaya inaysan taasi run ahayn, balse ay khaldanayd qaabka ay ciyaarta u wajeheen. Macallinka ayaa u muuqda mid isbedel sameeyay, balse way adag tahay inay bedelaan natiijada haatan.
28 MVOGO, 6 KONATE’, 3 BERNARDO, 31 DEMME, 24 KAISER, 10 FORSBERG, 29 AUGUSTIN
22 SEPE, 26 KOULIBALY, 23 HYSAJ, 30 ROG, 8 JORGINHO, 7 CALLEJON 37 OUNAS
Milik, Ghoulam, Chiriches
Laacib ka tirsan Barcelona oo aaminsan in PSG ay Champions League ka saari doonto Real Madrid
RASMI: Sergi Roberto oo heshiis cusub u saxiixay Barcelona (Imisa ayaa lagu burburin karaa)